Warar - Dahaar loogu talagalay dhalinta tamarta qorraxda oo beddeli karta silikoonka
Waqtigan xaadirka ah, nooc ka mid ah daaha "sixirka" ayaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo "silicon" dhalinta tamarta qorraxda.Haddii ay ku dhacdo suuqa, waxay si weyn u yareyn kartaa qiimaha tamarta qorraxda waxayna keenaysaa tikniyoolajiyadda isticmaalka maalin kasta.
Adoo adeegsanaya baalayaasha qoraxda si ay u soo nuugaan falaaraha qorraxda, ka dibna loo maro saamaynta sawirka, shucaaca falaadhaha qorraxda ayaa loo rogi karaa tamar koronto - tan waxaa badanaa loo yaqaannaa soo saarista tamarta qorraxda, taas oo loola jeedo baalayaasha cadceedda ee maaddada ugu muhiimsan. silikoon ”.Waxaa kaliya sabab u ah qiimaha badan ee isticmaalka silikoonka in tamarta qoraxda aysan u noqon qaab si ballaaran loo isticmaalo ee dhalinta korantada.
Laakiin hadda nooc ka mid ah daaha "sixirka" ayaa lagu soo saaray dibedda waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo "silicon" dhalinta tamarta qorraxda.Haddii ay ku dhacdo suuqa, waxay si weyn u yareyn kartaa qiimaha tamarta qorraxda waxayna u keenaysaa tiknoolajiyadda isticmaalka maalin kasta.
Casiirka miraha waxaa loo isticmaalaa maadada midabka
Mid ka mid ah hay'adaha ugu horreeya ee cilmi baarista qaybta Solar power-ka waa Machadka MIB-Solar ee Jaamacadda Milano ee Bicocca, Talyaaniga, oo hadda tijaabinaya dahaadh loogu talagalay awoodda Solar-ka oo loo yaqaan DSC Technology.
Teknolojiyada DSC Mabda'a aasaasiga ah ee daahan tamarta qorraxda ayaa ah in la isticmaalo sawir-qaadaha loo yaqaan 'chlorophyll photosynthesis.' U isticmaal casiirka nooc kasta oo miro ah si aad u farsameyso, u sug sida sharaabka casiirka buluugga, miraha loo yaqaan 'raspberry', canabka casaanka. Midabada ku habboon rinjiga waa casaan iyo guduud.
Unugga cadceedda ku shaqeeya ee la socda dahaadhka sidoo kale waa mid gaar ah. Waxay isticmaashaa mashiin daabacan oo gaar ah si loogu daabaco nanoscale titanium oxide gal shaxeed, kaas oo markaa lagu dhex rido rinjiga dabiiciga 24 saac. Marka dahaadhka lagu hagaajiyo oksaydhka titanium, unugga qorraxda ayaa la sameeyaa.
Dhaqaale, ku habboon, laakiin aan tayo lahayn
Way fududahay in la rakibo Caadi ahaan waxaan aragnaa baararka qoraxda oo lagu rakibay dhegaha, saqafka, kaliya qeyb ka mid ah dusha sare ee dhismaha, laakiin rinjiga cusub ayaa lagu dabaqi karaa qeyb kasta oo ka mid ah dusha sare ee dhismaha, oo ay ku jiraan galaaska, sidaas darteed waa ka badan tahay Ku habboon dhismayaasha xafiiska Sannadihii ugu dambeeyay, qaabka dibedda ee dhammaan noocyada dhismayaasha dhaadheer ee adduunka oo dhan ayaa ku habboon noocan oo kale ah qorraxda tamarta qorraxda. Tusaale ahaan u soo qaad dhismaha UniCredit ee magaalada Milano. Darbigeeda dibeddu wuxuu fadhiyaa aqlabiyadda dhismaha. Haddii lagu daboolay rinjiga soo saarista tamarta qorraxda, waa mid aad waxtar u leh marka laga eego dhinaca tamarta keydinta.
Xagga kharashka, rinjiga dhalinta korontada sidoo kale waa ka “dhaqaale badan yahay” darbiyada. Dahaarka tamarta qorraxda waxay ku kacaysaa shan meelood hal meel sida loo yaqaan 'silicon', oo ah qalabka ugu muhiimsan ee qoraxda. Asal ahaan waxay ka kooban tahay rinjiga dabiiciga ah iyo titanium oxide, labaduba waa raqiis oo wax soo saar badan.
Faa'iidada dahaadhku ma aha oo kaliya inay qiimo jaban tahay, laakiin sidoo kale inay bey'ad ahaan aad ula jaanqaadi karaan qaybaha "silikoon". Waxay ku shaqaysaa cimilada xun ama xaaladaha mugdiga ah, sida dusha sare ama waaberiga ama maqribka.
Dabcan, nooca noocan ah ee tamarta qoraxda ayaa sidoo kale leh daciifnimo, taas oo aan u adkeysan karin sida loo yaqaan "silicon" guddiga, iyo waxtarka nuugista ayaa ka hooseeya. Qaybaha cadceedda sida caadiga ah waxay leeyihiin cimri dherer ah 25 sano, ayay cilmi baarayaashu sheegeen. ee soosaarka tamarta qorraxda ee la rakibay 30-40 sano ka hor wali waa dhaqangalayaan maanta, halka nolosha naqshadeynta rinjiga tamarta qorraxda ay tahay oo keliya 10-15 sano; Qalabka korontada ku shaqeeya ee qorraxda ayaa boqolkiiba 15 waxtar leh, dahaadhka dhaliyana korontadu waa kala bar sida ugu habboon. qiyaastii 7 boqolkiiba.